कतै तपाईलाई क्याल्सियमको कमी भएर यस्ता समस्या त देखिएका छैनन् ?:: Naya Nepal
कतै तपाईलाई क्याल्सियमको कमी भएर यस्ता समस्या त देखिएका छैनन् ?
काठमाडौं- आजकल जीवनशैली र मिस्ठान खानपानले गर्दा क्याल्सियमको अभाव एउटा सामान्य समस्या भएको छ। वृद्ध व्यक्तिहरू मात्र होइन युवाहरूमा पनि यस समस्याको शिकार बनेका छन् । हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि शरीरमा क्याल्सियमको उचित मात्रा हुनु आवश्यक हुन्छ ।
क्याल्सियमले हड्डीहरूलाई मात्र बलियो बनाउँदैन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र क्यान्सर जस्ता थुप्रै समस्याहरूबाट पनि बचाएर राख्छ । रगतमा घुलिएको क्याल्शियमले हामीलाई स्नायु प्रणाली मार्फत हाम्रा मांसपेशीहरू र कोषहरू सक्रिय राख्न मद्दत गर्दछ।
हड्डी र दाँतको संरचना बाहेक क्याल्सियमको केही अंश रगतमा पनि घुलिन्छ, जसले हामीलाई शरीरको कार्यहरू ठीकसँग चलाउन मद्दत गर्दछ, जसको कारणले हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ।
कुनैपनि व्यक्तिको हड्डी कमजोरी हुनु भनेको क्याल्सियमको अभाव भयो भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । शरीरमा क्यासियमको कमी हुँदा हड्डीहरू कमजोरी हुनका साथै विभिन्न खाले समस्याहरू पनि सुरु हुनछन् ।
यस समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागी धेरै मानिसले क्याल्शियम औषधी प्रयोग गर्छन्, तर अधिक औषधीको प्रयोग हाम्रो शरीरको लागि उपयुक्त हुँदैन् । त्यसैले हामीले केही घरेलु उपचारहरूको सहयोगमा यस समस्याबाट मुक्त हुन प्रयास गर्नुपर्दछ।
शरीरमा क्याल्सियमको अभाव हुनुका कारण:
पाचन शक्ति कमजोर भएमा उनीहरूको शरीरमा क्याल्सियम कम हुन थाल्छ,
यो समस्या दैनिक क्याल्सियमयुक्त आहारको उचित मात्रामा नलिए पनि हुन्छ,
अत्यधिक घामको कारण, म्यानुअल मेहनत र यौगिक गतिविधिहरूको अभावका कारण हाम्रो शरीरमा क्याल्सियम कम हुन थाल्छ। जसको कारण हामी कमजोर र थाकेको महसुस गर्न थाल्छौं।
अत्यधिक चिनी पदार्थहरूको सेवनले हाम्रो शरीरमा क्याल्सियमको कमी पनि निम्त्याउँछ। यस समस्याबाट बच्न, उचित मात्रामा क्याल्सियम खपत यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
क्याल्शियमको कमीलाई हटाउन घरेलु उपचार:
दूध क्याल्शियमको उत्तम स्रोत हो। हाम्रो शरीरले सजिलै दुधबाट क्याल्सियम पचाउँछ। त्यसकारण, दैनिक दूधको उपभोग गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो शरीरमा क्याल्सियमको अभाव समाप्त गर्दछ।
क्याल्शियमको कमीबाट राहत पाउनका लागी बन्दाकोबी खानु एक सरल तरीका हो। यसमा ९० मिग्रि क्याल्सियम हुन्छ। एक सलादको रूपमा दैनिक गोभी खाएमा हड्डीहरूलाई बलियो बनाउँछ।
सामान्यतया सबैलाई दाल खान मन पर्छ। यो फाइबरयुक्त खाना धेरै स्वस्थ छ। यसको दैनिक सेवनले क्याल्शियमको अभावबाट सजीलोमुक्त हुन सकिन्छ।
बदाममा धेरै पौष्टिक गुणहरू हुन्छन्। यसको सेवनले क्याल्शियमको कमीलाई हटाउनका साथै उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न, तौल घटाउन र कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
सुन्तला क्याल्सियमको अभाव हटाउन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ। सुन्तला भिटामिन सी को स्रोतका रूपमा परिचित छ, तर शरीरले यसको सेवनबाट क्याल्सियमको पर्याप्त मात्रा पनि पाउँदछ। सुन्तलाको दैनिक सेवन गरेर क्याल्सियमको अभाव सजिलै शरीरबाट हटाउन सकिन्छ।